महिनावारी 'कप' के हो? कसरी प्रयोग गर्ने? - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / महिनावारी ‘कप’ के हो? कसरी प्रयोग गर्ने?
महिनावारी स्वच्छ बनाउन हामी ’स्यानिटरी प्याड’ प्रयोग गर्दै आएका छौं। अचेल ’ट्याम्पुन’ पनि बजारमा देखिन थालेको छ। ट्याम्पुन भनेको कपासलाई लाम्चो आकार दिएर बनाइएको साधन हो, जुन महिनावारी बेला योनीभित्र राखिन्छ। यसले रगत सोस्छ। विदेशमा यसको चलन धेरै भए पनि हामीकहाँ प्याडजस्तो सर्वसुलभ छैन।
यसबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रस्ट भनेका छन्– यो कपले कुमारीत्वमा कुनै असर पार्दैन। कुमारीत्वको अवधारणा आफैंमा बाझिएको छ। योनीको झिल्ली च्यातिएमा कुमारीत्व भंग भएको मानिन्छ, जुन सबै महिलाका हकमा समान हुँदैन। मेन्स्ट्रुअल कप वा ट्याम्पुनजस्ता साधनले यसमा कुनै असर गर्दैन।
मेन्स्ट्रुअल कप उत्पादन गर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीहरू रुबी कप र अर्गानी कपले यो दाबी पनि गरेका छन्।